HTC One M9 နှင့် One M8 ကို Android 5.1.1 Lollipop တွင်အဆင့်မြှင့်တင်မည် Androidsis
Alexis Martinez | | HTC က, Android ဗားရှင်း
ထုတ်လုပ်သူများ၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ်မွမ်းမံမှုပြaနာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ Google သည် Autumn ဗားရှင်းသစ်ကိုဆောင်း ဦး ရာသီ၌ပြသလေ့ရှိပြီးတရားဝင်တင်ဆက်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်တွင် source code ကိုဖြန့်ချိပေးသည်။ ထို့ကြောင့် developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ ROMs နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို update လုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်သူတို့၏စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုမွမ်းမံပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ Android အကွဲကွဲအပြားပြား ဗားရှင်းအသစ်များဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ ဆက်၍ တိုးတက်နေပါ ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို update လုပ်ဖို့ဘက်ထရီတွေတပ်ထားတာကြောင့်အခုတော့ဒီအပိုင်းအစတွေကနည်းနည်းလေးမှေးမှိန်သွားပြီဆိုတာမှန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကိုနောက်ကျအောင်မွမ်းမံတဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြောတာကဘယ်တော့မှမကုန်နောက်ကျပဲ HTC သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သောထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် ၅.၁.၁ ဖြစ်သည်။ တရုတ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံသော်လည်း၊ ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်းများတွင်အထူးသဖြင့်၊ HTC One ကို M9 y တဦးတည်း M8.
@ Sneakygh0st Nope, M9 ။ M8 ဖြန့်ချီမှုသည်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- LlabTooFeR (@LlabTooFeR) ဇူလိုင်လ 31, 2015
သူတို့ထဲကပထမ ဦး ဆုံး တဦးတည်း M9နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုလက်ခံသင့်သည် သြဂုတ်လ၏ဤလအတွင်းကုမ္ပဏီတွင်းပြproblemsနာများကြောင့်ခန့်မှန်းထားသည်ထက်တစ်လအကြာတွင်ဖြစ်သည်။ သူ့အစ်ကိုအငယ် တဦးတည်း M8Android 5.1.1 Lollipop ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည် အစောပိုင်းကျဆုံးခြင်း.
ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရသည့်တွစ်တာအသုံးပြုသူသည်တရုတ်နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ့ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူသိများခဲ့သည်။ Android 5.1.1 Lollipop သည် Google ၏မိုဘိုင်း operating system အတွက်အနည်းငယ်မျှသာ update ပြုလုပ်သောကြောင့်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဤဆိပ်ကမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏စက်ကိရိယာများကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းသို့နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One M9 နှင့် One M8 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်မည်